Nezimvume of the Empire, Russian - bill ubhalwe 1818-19, Government of Alexander I.
Lo mbhalo Kucatshangwa ukudalwa eRussia State of the Seimas (iPhalamende), ehlanganisa maqhugwane le Ambassadors 'futhi iSigele.
Ngaphezu kwalokho, i-Charter of the Empire, Russian kwakusho ukudalwa uhlelo bicameral emkhakheni ukuphathwa.
Ngokusho idokhumenti, inkosi bhunga ilungelo ukuze Veto futhi ilungelo ngokusuka zomthetho. A Ukudla State kufanele uvumele imithetho kanye ibhajethi. Kwakuthinta babecabanga ukuthi amalungu ephalamende uzobe akhethwe inhlangano enhle, imiphakathi yasemadolobheni iyazama ukubonisa.
Nezimvume we wathola igama lephrojekthi Novosiltsev ngegama umlobi. Izazi-mlando eziningi bakubheka njengodumo noma ingxenye enkulu kabusha kuka-Alexander I.
Imfuneko ukudalwa umthethosivivinywa kubhekwe njengento Russian ukuphathwa crisis uhlelo kuwo wonke amazinga, okuyinto kwaba sobala ekuqaleni kwekhulu le-19. Izindlela isikhathi eside ivikela ukuthula komphakathi, ngokungazelelwe ziphelelwe isikhathi futhi zidinga esikhundleni esiphuthumayo. Lesi simo ngenxa yezizathu eziningana. Okokuqala, eYurophu ngaleso sikhathi kwakukhona ukuguqulwa enobudlova. The French Revolution, izimpi sikaNapoleon ayikwazanga kodwa omubi ekukhuleni wekuba sive eRussia. Ngaphezu kwalokho, izinqubo zangaphakathi ukuthi kuyizinto ukuphila wezwe yomphakathi, ukucacisa Vector sokuthuthuka isikhathi eside, bafika ezingqubuzana izimfuno ezintsha ezenziwe isimo inqubomgomo angaphandle.
Nezimvume of the Empire, isiRashiya, hhayi kuphela ukuthi sathatha bonke isipiliyoni yezinguquko odlule. Sekuvele oluphelele, ngokuvumelanayo ezihlanganiswe ngokwayo imibono ekuqaleni disparate.
Ukuze abacwaningi lanamuhla ahlaziye le dokhumenti kwenza kube nokwenzeka ukuba baqonde ukuthi izici zangaphakathi nezangaphandle kunqunywa isimo Russian ngaleso sikhathi.
Nezimvume of the Empire, Russian ikuvumela uhlole imodeli social ukuthi u-Alexander I akazange abe nesikhathi asebenze.
Naphezu kweqiniso lokuthi inkosi ifika ukuzambona sobukhosi esemncane, wayegunde Umbono mayelana izici ukuthuthukiswa yangaphakathi yezwe.
Ngesisekelo imibono yabo yezombusazwe, wadala nomqondo wokuthi "ohlanga kweqiniso", eyayisekelwe ku-postulate ukuthi amandla kufanele basonta le nkosi, kodwa kunemithetho ezingeguquleke, okuyinto akunamandla ngisho intando yasebukhosini. Ngakho, kudingeka izikhungo ezokwenza ukuqapha ukulandelwa kwale mithetho.
Danae umqondo ka kwakuwukuthi uhlelo umthetho izimiso ezithile eliyisisekelo kuye kwavama emicimbini umcabango European ekupheleni kwekhulu le-18.
Nokho, emhlabathini wase-Russian, waphenduka ube ukuqina kwamandla autocratic.
State nezimvume of the Empire, Russian yayihloselwe Ihlanganisa umbono ka-Alexander ku eziyisisekelo zokuphila emphakathini.
Ngosizo le dokhumenti, kwenziwa umzamo ukuxazulula izinkinga eziningana ukuthi zibe ngemva kokubusa uCatherine Omkhulu.
Ngakho, kunesidingo wokuguqula apharathasi isimo, okuyinto wayengaphelele kakhulu ngenxa ukungalingani e lonke uhlelo lokulawula. Russia ngaleso sikhathi kwakuhlukile heterogeneity ezindawo kanye nesakhiwonchanti setenhlalo. Isimo akuyona yomkhakha owodwa. Kwezinye izindawo ubuswa ubudlelwane tribal, kanti kwezinye capitalism asethuthukile.
Futhi lokho, futhi enye inkinga kumele ixazululwe ngosizo ikhodi entsha, eyayisekelwe amandla yomthetho.
Ngakho, i-Charter of the Empire isiRashiya, limelela esivelele kabusha izinyathelo uhulumeni ka-Aleksandru I. yisibonelo impela ithuluzi ephikisayo, ngakolunye uhlangothi, ukuqinisa amandla le nkosi, ngakolunye uhlangothi limelela umzamo wokuqala ukusungula "uMthethosisekeleo Russian." Ngaleso sikhathi kwaba eziphambili ngempela idiploma incwadi manje ayikho into emlandweni.
Kiev: yokukhululwa emzini abahlaseli amaNazi (1943)
Umlando wokubusa Septimius Severus
Library ku-internet Ivana Groznogo futhi ibhodi
154 bathinteka ibutho Usigaxamabhande we isimo
Inkampani yezokuthutha i-PEC: ukubuyekezwa kwamakhasimende
Askorbinki ne-glucose: yokusetshenziswa futhi impendulo
Amafilimu mayelana adventure: Uhlu imidwebo on isihloko kolwandle
Ithoni kwesibeletho ekukhulelweni ekuseni
Toy transformer njengoba okungcono baby isipho
Fox ekhaya: izici nemibandela yeziboshwa. Ukuziphatha izimpungushe njengezilwane ezifuyiwe
Angifuni lutho! Uyaqiniseka ngalokho?